မောင်စေတနာ: Beautifully Myanmar Fonts
Beautifully Myanmar Fonts
နေရာစုံမှာ အသုံးတည့်တဲ့ ဖောင့်တွေလို ဆိုရပါမယ်။ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း တော်တော် သုံးစွဲနေကြပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ ရှိသင့်သလို ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာလည်း ရှိနေကြမှာပါ။ လိုရမယ်ရ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Download လုပ်ယူပါ။ Link ပြန်ချိန်းပေးထားပါတယ်။
29 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်:
fonts name လေးတွေကို ထည့်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲ။ မလိုအပ်ပဲ မဒေါင်းရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ Thanks
6:26 PM, September 28, 2010
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဒေါင်းသွားပါတယ် ဂျာ။ ကျေးကျေးနော်
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် အကို.. ကျနော်လည်း မြန်မာဖောင့်တွေ ဒေါင်းသွားပါတယ် .. အလုပ်မအားတဲ့ကြားက ကျနော့်ကို လက်ခံစကားပြောပေးနိုင်တဲ့ အတွက်လည်း အရမ်းဘဲ ၀မ်းသာရပါတယ်.. နောက်နောင်မှာ ကျနော်သိချင်တာလေးတွေကိုလည်း မေးပါရစေ ခင်ဗျာ...
11:07 AM, September 29, 2010
ကျေးဇူပါ ဘဲ အကုန်ဒေါင်းယူထားလိုက်ပါတယ်
11:31 AM, September 30, 2010
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို ရေ..။
flash song လုပ်ရင် စာလုံးလှလှလေးတွေက အသုံးတည့်တယ်ဗျ..။ ပျော်ရွှင်ပါစေ...။
12:30 PM, October 01, 2010
4:44 PM, October 07, 2010
ကျွန်တော် ဒေါင်းတာ စက်ထဲက ဗိုက်ရပ်စ်ဆော့ဝဲထမြည်တယ်ဗျ
အသုံးပြုနည်းလေးပြောပြပါလားဗျာ ကျွန်တော်က ကျွန်ပျူတာသုံးတာမကြာသေးလို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါ ကိုစေတနာ...ပျော်ရွှင်ပါစေ
4:53 PM, January 18, 2011
အကိုရေ စက်ထဲ သွင်းပုံ လေးပြောပါအုံး.....
1:12 PM, January 24, 2011
မောင်စေတနာ တင်ထားပေးတာ RAR ဖိုင်အမျိုးအစားနဲ့ပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်လည်းဖိုင်ကြီးက ဘာဖိုင်အမျိုးအစားမှန်းမသိဖြစ်နေမှာပါ Winrar မရှိရင် တခြား ဖြေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်။ မရှိရင် ဒီမှာ http://www.rarlab.com/ ယူ ဒါမှမဟုတ် http://mgsaytanar.blogspot.com/2009/03/winrar-software.html ဒီမှာယူ Winrar သွင်းပြီးသွားရင် ခုနက ဒေါင်းလုတ်ထားတဲ့ Font.rar ဖိုင်ကို Right Click >> Extract Here လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့နေရာမှ ဖြေပေးပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် Font ဆိုတဲ့ Folder ဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပြီး XP မှာ- Ctrl+A ပြီးရင် Ctrl+C ပြီးရင် Control Panel က Fonts Folder ဖိုင်ထဲမှာ Ctrl+V ပြန်နှိပ် ရင် ရပါပြီ။ တကယ်လို့ ဗိုင်းရပ်ကိုက်ထားရင် Font ဖိုင်ကြီးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော် ဒီတော့် ကီးဘုတ်ပေါ်က Window Key နဲ့ R ကို နှိပ်၊ ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ fonts ရိုက်ထည့်ရင် Fonts Folder ပွင့်လာမှာပါ။ Vista နဲ့7မှာတော့ winrar နဲ့ဖြေထားတဲ့ Font Folder မှာ Ctrl+ A ပြီးရင် Right Click နှိပ်ပြီး Install ကို ရွေးလိုက်ရုံလေးပါ။
အဆင်ပြေမှာပါ မသိသူများအတွက် ..
Excellent Mai Soong,
6:43 PM, February 11, 2011
7:09 PM, July 22, 2012
7:10 PM, July 22, 2012
7:11 PM, July 22, 2012
အစ်ကိုရေ Link သေသွားပြီလားမသိဘူး။ ဆွဲလို့မရတော့လို့ပါ..။ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်တင်ပေးစေလိုပါတယ်..။အားကိုးလျှက်.....
1:15 PM, February 02, 2013
ဆရာစေတနာခင်ဗျာ ဆွဲလို့မရတော့ပါ link လေးပြန်စစ်ပေးပါအုံး...
11:22 AM, June 29, 2013
Rax Azh said...
download ma ya မ့ရတော့ပါ ကျေးဇူးပြု ပြီးပြန်တင်ပေးပါလား
6:16 PM, November 05, 2013
အကိုရေ ကျနော့်အီးမေးထဲ ပ်ို့ပေးပါလား ကျေူး ဇူးပြု ပြီးတော့ raxazh@gmail.com
6:21 PM, November 05, 2013
Thant Zaw said...
အစ်ကိုရေ Link က download လုပ်လို့မရတော့ဘူး အားရင် ပြန်တင်ပေးပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
site ကတော့ disable ဖြစ်နေပါပြီ။ဒေါင်းမရပါ။
11:01 PM, May 05, 2015
DRAMATIC SIGHT said...
8:11 PM, December 11, 2016
3:00 PM, January 20, 2017
ဆာန် ဇူ said...
7:21 AM, January 26, 2017
Jole Set said...
Ph အတွက်​​လေးလဲ တင်​​ပေးပါ​ဗျာ
6:32 PM, May 11, 2017